Jabuuti Oo Dooneysa in ay Qaado talaaabo Dowlada Itoobiya kaga Hor martay+ Maxay Tahay.
Hargaysa (Gebogebonews)-Dowlada Jabuuti ayaa markeeda dooneysa in la xaliyo khilaafka siyaasadeed ee kala dhaxeeya dowlada Eritrea, waxa ayna Jabuuti codsatay in gacan laga siiyo sidii xal loo gaadhi lahaa.
Jabuuti ayaa xoghayaha guud ee Qaramada Midoobay Antonio Guterres ka codsatay in uu kala shaqeeyo gacana ka geesto in heshiis laga gaadho muranka dhinaca xadka ah ee kala dhaxeeya Eritrea.
Jabuuti ayaa dooneysa in arrinka muranka xadka ee kala dhaxeeyo dalka Eritrea la hordhigo garsoorayaal caalami ah si ay go’aan uga gaadhaan, kadibna labada wadan ka heshiiyaan khilaafka u dhaxeeya.
Dalka Jabuuti ayaa Eritrea ku eedeysay in ay ciidamadeeda si sharci darro ah ku qabsadeen buuraha Dumeeyra isla markii ciidamadii nabad illaalinta ee Qatar ka socday ay ka baxeen halkaas sanadkii hore.
Dowlada Itoobiya ayaa heshiisyo muhiim ah oo lagu xalinayo colaad 20-sano socotay waxa ay la gashay dowlada Eritrea, waxaana labada dal hada dib usoo celiyeen xidhiidhkii diblumaasi ee ka dhaxeeyay labada wadan,